Tsamba kuvaRoma 8:1-39
Upenyu nerusununguko kuburikidza nemweya (1-11)
Mweya wekutorwa sevanakomana unopupurira (12-17)
Zvisikwa zvinomirira kusunungurwa sevanakomana vaMwari (18-25)
‘Mweya unotibatsira uchiteterera’ (26, 27)
Mwari akagara avagadza (28-30)
Tinokunda nerudo rwaMwari (31-39)
8 Saka vaya vari pamwe naKristu Jesu havawanirwi mhosva. 2 Nekuti mutemo wemweya, uyo unopa upenyu huri pamwe naKristu Jesu, wakakusunungurai+ pamutemo wechivi newerufu. 3 Zvakakundikana kuitwa neMutemo+ nekuti wakanga usina simba+ munyama, Mwari akazviita nekutuma Mwanakomana wake+ akafanana nemunhu wenyama inotadza,+ kuti abvise chivi uye ape mhosva chivi chiri munyama, 4 kuti zvinodiwa neMutemo zvakarurama zvizadziswe matiri+ isu tinofamba maererano nemweya,+ kwete maererano nenyama. 5 Nekuti vaya vanorarama maererano nenyama vanoisa pfungwa dzavo pazvinhu zvenyama,+ asi vaya vanorarama maererano nemweya, pazvinhu zvemweya.+ 6 Nekuti kufunga kwenyama kunoreva rufu,+ asi kufunga kwemweya kunoreva upenyu nerugare;+ 7 nekuti kufunga kwenyama kunoreva kuvengana naMwari,+ sezvo nyama isingazviisi pasi pemutemo waMwari, uye haitokwanisi kudaro. 8 Saka vaya vanoita maererano nenyama havagoni kufadza Mwari. 9 Asi imi, kana mweya waMwari uchigara mamuri zvechokwadi, muri kuita maererano nemweya,+ kwete nenyama. Asi kana munhu asina mweya waKristu, munhu iyeyu haasi waKristu. 10 Asi kana Kristu ari pamwe nemi,+ muviri wakafa nekuda kwechivi, asi mweya ndiwo upenyu nekuti makarurama. 11 Saka kana mweya waiye akamutsa Jesu kuvakafa uchigara mamuri, iye akamutsa Kristu Jesu kuvakafa+ achaitawo kuti miviri yenyu inofa ive mipenyu+ achishandisa mweya wake unogara mamuri. 12 Saka hama, tine zvatinofanira kuita, kwete kuzviitira nyama yedu kuti tirarame maererano nenyama;+ 13 nekuti kana muchirarama maererano nenyama, chokwadi muchafa; asi kana mukauraya mabasa emuviri+ muchishandisa mweya, muchararama.+ 14 Nekuti vese vanotungamirirwa nemweya waMwari, ndivo vanakomana vaMwari.+ 15 Nekuti hamuna kugamuchira mweya weuranda unokonzera kutya zvakare, asi makagamuchira mweya wekuti mutorwe* muve vanakomana, unova ndiwo mweya watinoshevedzera nawo kuti: “Abha,* Baba!”+ 16 Mweya wacho pachawo unopupurirana nemweya wedu+ kuti tiri vana vaMwari.+ 17 Saka kana tiri vana, tinogarawo nhaka, nhaka yaMwari, asi tinogara nhaka+ iyi pamwe chete naKristu, chero bedzi tichitambura pamwe chete+ kuti tizokudzwawo pamwe chete.+ 18 Nekuti ndinoona kuti kutambura kwepanguva ino hapana zviripo kana kuchienzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa matiri.+ 19 Nekuti zvisikwa zviri kumirira nemwoyo wese zvichitarisira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari.+ 20 Nekuti zvisikwa zvakaitwa kuti zvive zvisina zvazvinobatsira,+ kwete nekuda kwazvo, asi nekuda kwaiye akaita kuti zvidaro, paine tariro 21 yekuti zvisikwa zvichasunungurwawo+ muuranda hwekuora zvova nerusununguko runobwinya rwevana vaMwari. 22 Nekuti tinoziva kuti nguva yese iyi zvisikwa zvese zviri kungogomera pamwe chete uye zviri kurwadziwa pamwe chete. 23 Hazvisi izvozvo chete, asi isuwo vacho vane zvibereko zvekutanga, kureva mweya, isu pachedu tinogomera nechemukati,+ tichimirira nemwoyo wese kuti atitore* atiite vanakomana vake,+ tisunungurwe mumiviri yedu nerudzikinuro. 24 Nekuti takaponeswa mutariro iyi; asi tariro inoonekwa haisi tariro, nekuti munhu angatarisira chinhu kana achichiona here? 25 Asi kana tichitarisira+ chatisingaoni,+ tinoramba takachimirira nemwoyo wese tichitsungirira.+ 26 Saizvozvowo, mweya unopindira uchitibatsira nekuti hatina simba;+ nekuti chinonetsa ndechekuti hatizivi zvatinofanira kunyengeterera, asi mweya unotikumbirira patinenge tichigomera tichitadza kubudisa mashoko. 27 Asi iye anoongorora mwoyo+ anoziva zvinenge zvichirehwa nemweya, nekuti uri kuteterera maererano nekuda kwaMwari uchibatsira vatsvene. 28 Tinoziva kuti Mwari anoita kuti mabasa ake ese apindirane kuti zvinakire vaya vanoda Mwari, vakadanwa maererano nechinangwa chake;+ 29 nekuti vaya vaakatanga kufunga nezvavo akagara avagadzawo kuti vafananidzwe nemufananidzo weMwanakomana wake,+ kuti ave dangwe+ pakati pehama dzakawanda.+ 30 Uyezve vaya vaakagara agadza+ ndivo vaakabva adana;+ uye vaya vaakadana ndivo vaakabva ati vakarurama.+ Vaya vaakati vakarurama ndivo vaakabva azokudza.+ 31 Saka totii nazvo? Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angamirisana nesu?+ 32 Sezvo asina kutombozeza kupa Mwanakomana wake kuti atifire tese,+ angatadza here kutipawo zvimwe zvese pamwe naye? 33 Ndiani achati vanhu vakasarudzwa naMwari vane mhosva?+ Mwari ndiye anovati vakarurama.+ 34 Ndiani achavawanira mhosva? Kristu Jesu ndiye akafa, uye kupfuura izvozvo, ndiye akatomutswa kuvakafa, ndiye ari kuruoko rwerudyi rwaMwari+ uye ndiyewo anoteterera achitimiririra.+ 35 Ndiani achatiparadzanisa nerudo rwaKristu?+ Kutambura here kana nhamo kana kutambudzwa kana nzara kana kushaya zvekupfeka kana njodzi kana bakatwa?+ 36 Sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Nekuda kwenyu tiri kuswera tichiurayiwa; takanzi tiri makwai anofanira kuurayiwa.”+ 37 Asi zvinhu zvese izvi tiri kuzvikunda zvese+ tichibatsirwa naiye akatida. 38 Nekuti ndine chokwadi kuti rufu kana upenyu kana ngirozi kana hurumende kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvinhu zvichauya kana masimba+ 39 kana kukwirira kana kudzika kana chimwe chinhu chakasikwa hazvizokwanisi kutiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu.
^ Shoko racho rechiGiriki rinoshandiswa pamunhu anoita kuti mwana asiri wake wekubereka ave wake zvepamutemo.
^ Iri ishoko rechiHebheru kana kuti rechiAramaiki rinoreva kuti “Baba!” Rinoshandiswa nevana vadiki vachidana vanababa vavo.
^ Ona mashoko emuzasi ekutanga ari pana VaR 8:15.